Luz-Lixesha ngoku! -Ukubuyela eBukumkanini
Luz – Ngoku lixesha!
INkosi yethu uYesu Kristu ukuba	NguLuz de Maria de Bonilla NgoJanuwari 18th, 2022:
Abantu bam abathandekayo: Ndiyanithanda, ndiyanimema ukuba nihlale kwintando yam, nisebenze kwaye niziphathe njengokuba ninjalo: bantwana bam bokwenyani. Wuxabise umzuzu ngamnye ukuze uphile kubuzalwana, ngentliziyo yenyama kunye nokuqonda ngokupheleleyo. Thobela, uthande uBawo wam ngaphezu kwazo zonke izinto, ngaphandle kokulibala uMama wam kunye nomphathi wam endimthandayo woMkhosi weZulu.
Imikhosi yam yeeNgelosi ihlala phezu koluntu ukuze ize kuye nabani na oyicelayo ukuba yenze njalo. Ufumana ukusulungekiswa, kwaye indalo ikwisiphithiphithi. Izinto zivuselelwa kukwamkelwa kweeflare ezahlukeneyo zelanga Uphononongo lukaJulayi 2020 olupapashwe kwindawo edumileyo indalo Ijenali ibonisa unxulumano olunokubakho phakathi kwentshukumo yelanga kunye neenyikima ezinkulu: nature.com; bona iastronomy.com; bona Iziprofeto ezivela eLuzi malunga nomsebenzi welanga... eguqula imagnetism yomhlaba, Iziprofeto ezimalunga notshintsho kwimagnethi yomhlaba... kubangela ukuba unxibelelwano lube nokonakala kwaye luvule iimpazamo zetectonic. Umzimba womntu uyatshintshwa xa ufumana into engaqhelekiyo kumzimba wakho. Uluntu luphila kumaxesha okungaqiniseki. Umzuzu uyasondela xa kusetyenziswa kakubi isayensi Jonga i-documentary Ngaba Ulandela Inzululwazi? eyaveliswa, ngokuyinxenye, isekelwe kula mazwi akwisigidimi sangaphambili esivela eLuzi. uya kukwenza ukuba uphile ebumnyameni, ngoko ke ndinibizele ukuba nilungiselele.
Thandazani, bantwana, imfazwe isondele kwaye uluntu luya kubandezeleka.
Thandazani, bantwana, iintaba-mlilo ziyaqhubeka nokusebenza kwaye abantwana bam bayasokola.
Thandazani, bantwana, landela iMagisterium eyiNyaniso yeCawe yam.
Musa ukoyika ubumnyama, yoyika ukulahlekelwa ngumphefumlo wakho. Hlalani niphaphile, bantwana bam! Inyanga iya kubonakala inegazi, Iimpawu kunye neMiqondiso, iinyanga zegazi…; bona UFatima, kunye nokuGungqiswa okukhulu efanekisela intlungu yabo bangabam. Oko kubizwa ngokuba yiRing of Fire kwiPasifiki kushukumisa umhlaba usuka enzulwini yolwandle ngamandla amakhulu kunangaphambili, ephenjelelwa lilanga. Uza kubona indandatho elangeni - ikhonkco lomlilo, eliya kubonakala kumazwe amaninzi kwaye livela kwelinye. Ndiyanibiza kwakhona, bantwana, ukuba nizilungiselele ngokwasemoyeni kunye noko abantwana bam banako ukukugcina. Jonga izilwanyana ezilindele imozulu kwaye zigcine ukutya xa zingenako ukuya kufuna into eziyifunayo ukuze ziphile. Abantu bam kufuneka balumke xa iNdlu yam ibalumkisa. Abangenako ukugcina ukutya baya kuncedwa ndim. Musani ukoyika, musani ukoyika, musani ukuba nexhala.
Ngoku lixesha! Nika ingqalelo kwimiqondiso nemiqondiso… Musa ukuba yimfama ngokomoya! Khawulezisa inyathelo lakho, njengoko abaphezulu benyuka ngokukhawuleza, bethatha amandla amakhulu. Khumbula ukuba “Ndinguye endinguye”. (Eks 3: 14) Ndiyakugada ndiyakuthanda kwaye ndiyakulumkisa ukuze ungaxakwa. Yiza kum: undamkele ngoMthendeleko; kodwa ngaphambi kokuba uze kum, xolelana nommelwane wakho. Musani ukugweba (Mt 7: 1), njengoko ndenjenjalo kum. Yizani kum ngentliziyo ehlambulukileyo, nizolile ngaphakathi, ukuze ningabi njengabaFarisi. Gcina uxolo lwangaphakathi: ngena kwigumbi elingaphakathi kwaye udibane nam - ndikulindile. Yiba nobubele: musani ukusebenzisa iiCawe zam ukutshabalalisa abazalwana noodade wenu. Xolelanani kwaye nithandane njengabantu baM. Ndiyakusikelela ngeNtliziyo Yam. Ndiyakusikelela ngoThando lwam. Yesu wakho...
INkosi yethu uYesu Kristu isibiza ukuba sibe ngabagcini boMthetho wokuQala: “Uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, nangomphefumlo wakho uphela, nangamandla akho ephela. ( Dut. 6:5 )
Usibiza ukuba sibe ngabazalwana ukuze simbone kubazalwana noodade bethu, kwaye oku ukuze siqonde ukuba asiyi kukwazi ukujongana noko kuza kuza sisodwa.
Kwesi sibongozo iNkosi yethu uYesu Krestu isikhokelela ekuboneni iziganeko ezihlambulula uluntu, ethetha nathi ngokuchubekileyo malunga nobumnyama obukhulu ngokubiza ukusetyenziswa kakubi kwenzululwazi ukuze siqonde. Ngokufanayo, uthetha nathi ngemfazwe ukuze sizilungiselele ngokomoya noko mntu ngamnye anako, ngokwamandla akhe. Emva koko uchaza into esiyaziyo njengenyanga yegazi kulo nyaka kunye nomnyama welanga ochaphazela umhlaba wethu. Ezi ziganeko zeenkwenkwezi akufanele zithathwe njengomboniso kuphela, kodwa njengeMiqondiso kunye neMiqondiso yala maxesha.
Sikhumbula ukuba iNkosi yethu uYesu Kristu inenceba, masihlale simanyene nabazalwana noodade wethu: oku kubaluleke kakhulu ekulandeleni indlela yeNkosi yethu. Eli lixesha lomanyano, lokuva amandla avela phezulu, ukuze ububi bungaphumeleli ekwahluleleni nasekuloyiseni.
Eli lixesha elinzima kwesi sizukulwana. Ukutshatyalaliswa kobuntu kuyaqhubeka kwaye iMiqondiso kunye neMiqondiso ayenzeki nje ngenxa yoko, kodwa ngenxa yento eya kulandela kubo.
Phambili, Bantu bakaThixo!
Uphononongo lukaJulayi 2020 olupapashwe kwindawo edumileyo indalo Ijenali ibonisa unxulumano olunokubakho phakathi kwentshukumo yelanga kunye neenyikima ezinkulu: nature.com; bona iastronomy.com; bona Iziprofeto ezivela eLuzi malunga nomsebenzi welanga...
Iziprofeto ezimalunga notshintsho kwimagnethi yomhlaba...
Jonga i-documentary Ngaba Ulandela Inzululwazi? eyaveliswa, ngokuyinxenye, isekelwe kula mazwi akwisigidimi sangaphambili esivela eLuzi.
Iimpawu kunye neMiqondiso, iinyanga zegazi…; bona UFatima, kunye nokuGungqiswa okukhulu
← Nikela Yonke into
Ukukhubazeka Ngoloyiko →
Luz – Isilumkiso siyasondela ngokukhawuleza Ngamana 11, 2022
UPedro – Goba amadolo akho ngomthandazo Ngamana 10, 2022